Circuit emebi, Kpụrụ Case Circuit emebi - DaDa
Lewa leakage Circuit emebi
Modular Miniature Circuit emebi
Mmapụta Ugbu Circuit emebi na overcurrent Protection
SHANGHAI DADA Electric CO., LTD e guzobere na 2004, na-kwetara dị ka otu n'ime ndị kasị akwanyere ùgwù mba na-emepụta ala voltaji sekit emebi na China. Ngwaahịa dịgasị iche iche na-ekpuchi ndị na-agbaji elekere (MCB), ihe nkwụsịtụ sekit ugbu a (RCCB), Ihe Mgbapụ Oge A Na-ahụ Maka Ihe Nlekọta Na-ahụkarị (RCBO), ihe nkedo ndị na-akpụzi (MCCB), AC Contactor, na-ebugharị ọkụ ọkụ, Mkpuchi Mgbapụ Mgba ọkụ , wdg.
CDADA na-enye akwa quatlity circuit emebi ngwaahịa site na nlezianya mma achọpụta na bụla nzọụkwụ nke producton.
N'ime afọ 30 OEM & ODM ahụmahụ maka ndị ahịa ụwa si Middle East, USA, na Europe.
Anyị 100% ekwe nkwa asọmpi ahịa na anyị elu àgwà circuit emebi ngwaahịa. Ndị enyi anyị, ndị nnọchi anya ndị ahịa ruru eru ga-ahụkwa na ọrụ zuru oke n'oge niile.
Na mgbakwunye na usoro nhazi usoro ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị dị mfe ịnweta na-enye ndị ahịa mmelite ngwa ngwa na iwu.
DAB7LN-40 usoro DPN Residual Ugbu A ...
DAM1 Series Kwes bufee Operation akpụzi ...